Kiiska kumbuyuutarka ugu fiican ee iPadpad 10.2 2020 2019 ipad 8 ipad 7 Soo saare iyo Warshad | Socodka
Wixii loogu talagalay iPad Pro 11 2021 3rd Ge ...
Wixii Samsung galaxy tab A7 l ...
Anti-fall kiiska Shockproof f ...
Kiiska Keyboard ee Samsung g ...
Kiis Magnetic Xoog leh Oo loogu talagalay iP ...
Kiiska kumbuyuutarka taabashada ee iPadpad 10.2 2020 2019 ipad 8 ipad 7
QALBI QABSADA FARXAD COMBINATION
Loogu talagalay in lala shaqeeyo qalin, si aad gacanta ugu qori kartid qoraallo, sawir gacmeedyo, ama aad dukumintiyada toos ugu calaamadeysan karto iPad-ka Waxaa intaa sii dheer, qofka wax heysta wuxuu ku keydiyaa stylus-kaaga sidaa darteed had iyo jeer wuu joogaa markii aad u baahato.
QIIMEYNTA BADAN IYO KONTOROOLKA TRACKPAD
La shaqee saxanka saxanka saxanka ee barnaamijyada sida qoraalka, bogga, miiska nambarka iyo nuxurka. Waxaad awoodi doontaa inaad iftiimiso unugyada waraaqaha, nuqul ka sameyso ereyada, oo aad si fudud ugu saxto emaylka.
Si dhakhso leh ula soco waxsoosaarkaaga faraha badan ee tilmaanta farta ee aad hore u taqaanay una jeclayd. Swipe, rog, rog barnaamijyada, qanjaruufo, laba jibbaar, iyo inbadan.
Ka ilaali hore iyo gadaasha IPad-gaaga nabarrada, xoqida, iyo qubashada. Jilibka jilicsan ee TPU dhabarka ayaa si aamin ah ugu haysta iPad-kaaga kiis khafiif ah oo ilaaliya geesaha.
HADA TABABARKAAGU WUXUU SAMEEYI KARAA SIDA LAPTOP
Ku raaxayso saacado raaxo leh, makiinad dabacsan oo ku mahadsan furayaasha qaabka sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemayaan daal. Safarka muhiimka ah ee 2 mm wuxuu bixiyaa qoto dheerida ugu fiican ee xawaaraha iyo raaxada.
NOOCA KU SAABSAN BASHAARKAAGA AMA TAHAY LAP AMA DUKAANKA CAFE
Si fudud u furo kiiska oo bilow qoritaanka. Kiniinigaagu wuxuu kuxiran yahay meesha wax lagu qoro oo qumman oo si adag ayuu meesha ugu jiraa xitaa marka aad wax ku qoreyso meelaha aan sinnayn sida dhabtaada.
QSOO SAARIDDA SOO SAARKA UALITY waxay bixisaa ilaalin buuxda
Dibedda: laga sameeyay maqaar PU oo waara, ka ilaali kiniinkaaga boodhka, dhibcaha iyo kuuskuusyada loo isticmaalo maalin kasta.
Gudaha: microfibre jilicsan ayaa ka ilaaliya kiniinkaaga xoqida; Waxyaabaha ka-hortagga-xajinta ayaa ka hortagaya kaniiniga inuu hoos u dhaco.
Jilibka jilicsan ee TPU dhabarka ayaa ka ilaaliya ipad-kaaga, oo ha la ilaaliyo geesaha.
LACAG LA'AAN KIISBADDA KEYBOARD
Kiiboodhka bilaa xadhigga ahi waa mid si otomaatig ah loo kala saari karo, waad iska saari kartaa oo waxaad u rogi kartaa kiis ilaalin buuxda leh marka aadan u baahnayn kumbuyuutarka.
WAQTI DHEER NOLOSHA BATARI
Diyaar u ah marka aad u baahatid, kiiska guud ee kumbuyuutarka bluetooth wuxuu isticmaalaa batteriga lithium-ka dib loo soo celin karo si uu ugu xoojiyo kumbuyuutarka. Thanks to nidaamka awoodda smart, waxay socotaa illaa 3 sano iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo.
SETUP SASUUL AH, ISKU XIDHAN LAHAYN
Advanced Bluetooth 3.0 wuxuu bixiyaa xiriir la isku haleyn karo oo ka dhex dhici doonin kiniinka iyo kiiboodhka. Setup waa fududahay - seddex talaabo oo fudud ayaa qaata hal daqiiqo si loo dhameystiro.
Marka hore, ku riix batoonka "DAAR". Iftiinka iftiinka waa buluug.
Marka labaad, riix badhanka "FN + C"
Kadib, Daar shaqada kiniiniga Bluetooth-ga ah.Waxaad baari doontaa kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka.
Ugu dambeyntiina, waxay heli doontaa Keyboard-ka Bluetooth 3.0. Kaliya waad lamaanaysaa.
Laga bilaabo hadda, waxay si otomaatig ah ugu xirmi doonaan kiniinkaaga.
Haddii aad kiniiniga beddesho, waa inaad mar labaad ku xirtaa sida tallaabooyinka kor ku xusan.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 270 mm x 195 mm x 18 mm
MOQ: 10PCS / midab Shahaadada: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs
Baaxadda: 10.2 ”Naqshadeynta: Kiiska qalinka oo leh kumbuyuutarka taabashada laga saari karo
Xirxirida: Sanduuqa waraaqda, boorsada opp Payment: 1.T / T 2.Warrida galbeed 3. Paypal
Logo: Debossed / Aqbala Naqshadeynta OEM / ODM Naqshadeynta: aqbal naqshadeynta qaabaysan
Waqtiga bixinta: 3-5 maalmood oo shaqo
Nooca Xiriirka: Bluetooth 3.0 Iskuxir / Awood: Badhanka kumbuyuutarka On / Off
Magnet Hurdo / Soo-kac: Majiro Magnet Xidhanaya: Haa
Hole Camera: Haa Daboolka Magnetic: Haa
Safarka Muhiimka ah: Nalalka Tusiyaha 2 mm (LED): loogu talagalay Bluetooth iyo koronto
Kiiboodhka masaafada wax ku oolka ah: gudaha 10m Nolosha Furaha: in ka badan 3 milyan oo istaroog
Faahfaahinta batteriga: batari Lithium-ka ku dhex jira Nooca baytariga: Dib loo buuxin karo
Waxqabadka Keyboard: Trackpad, mousepad, taabasho
Nooca Kiiboodhka: Ruushka, Isbaanishka, Ingiriisiga, iyo noocyada kale ee luqadaha
Furayaasha Gaarka ah: Iskuxirka shaqooyinka dheeraadka ah ee furayaasha toobiye, oo ay kujiraan kontaroolada warbaahinta, xakameynta mugga, qufulka shaashadda iyo raadinta.
Hore: Kiiska BOOX Nova3 midab Nova 3 Nova 2 7.8 inch oo leh qalin qalin gacanta ku haysta
Xiga: Slim stand folio case for ipad mini 6 kiiska maqaarka casriga ah ee ipad mini 2021 cusub
Kiiboodhka Bluetooth-ka ee wireless-ka ah ipad Samsung An ...
Kiis magnetic leh kumbuyuutar isku dhafan ipad ...
Kiiska keydka ee Samsung galaxy tab A7 lite 8 ....
Kiiska kumbuyuutarka Bluetooth ee Samsung galaxy tab ...
Fureyaasha wareega kumbuyuutarka Bluetooth-ka ee ipad-ka loogu talagalay Sams ...